MAHAJANGA: VAKY NY FONJAN’I MAROFOTO, GADRA TELO NITSOAKA
On oct 26, 2018 8 898
Soratra sy sary: Judith Rakotovao
Nitsoaka tao amin’ny fonjan’i Marofoto eto Mahajanga ny voafonja telolahy, tokony ho tamin’ny 1ora antoandro androany Alakamisy 25 oktobra 2018. Efa tratra ny iray, mbola karohina kosa ny roalahy: Tovo sy Toussaint.
Nalefa tany amin’ny toeram-pitsaboana tao amin’ny fonja izy telolahy, fa nilaza ho tsy salama, raha ny fanazavan’ny lehiben’ny fonja ao Marofoto. Andro famangian’ny fianakaviana androany alakamisy ka betsaka ny olona nivezivezy. Nanararaotra an’izay izy telolahy ireo ary efa nomaniny izao fitsoahana izao. Nodarohan’izy ireo ny mpiambina teo torana sy naratra mafy ary nopotehin’izy ireo ny vy mamefy ny varavara, nahafahany nivoaka. Mbola tsaboina eny amin’ny hôpitaly Pzaga Androva ilay mpiambina fa naratra mafy, ary efa nahatsiaro tena izy ny hariva teo.
Efa misy ny fepetra noraisin’ny fandraharahana ny fonja eto Mahajanga, fiambenana ny toerana rehetra mety ahafahan’izy roalahy hivoaka an’i Mahajanga. Miara-misalahy amin’izany ny mpitandro filaminana isan-tsokajiny. Miantso ny fiaraha-miasa amin’ny mponina eto Mahajanga ihany koa ny tompon’andraikitra amin’ny fanomezana loharanom-baovao raha sendra mahita azy roalahy. Efa miparitaka arak’izany ny sary sy ny filazana ny fitadiavana an’ireto voafonja roalahy nitsoaka ireo.
TULÉAR: SIX ANS DE PRISON FERME ET 100 MILLIONS D’ARIARY D’AMANDE POUR LES TRAFIQUANTS DE TORTUES
FIFIDIANANA: HANAO RODOBE IZAO MARAINA IZAO NY KANDIDA MITSIPIKA NY DATIN’NY 7 NOVAMBRA
JENERALY RAKOTONIRINA THEOPHILE AUGUSTIN (EMGAM): RAHA MISY AZO ATAO FANATSARANA NY TAFIKA DIA RAISO NY ANDRAIKITRA”
ANKORONDRANO: SOS VILLAGE DES ENFANTS ET STARTIMES MADAGASCAR S’UNISSENT POUR L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES
Public health: The United States Government Launches » ACCES program » in Madagascar